Amụma Nzuzo-Kitchen, Ihe eji enweta ite, ite mmiri ịsa ahụ | WOWOW
Kedu ka Wowowfaucet.com si anakọta ozi gbasara m?
Anyị na-anakọta ozi site n'aka ndị ọrụ Site n'ọtụtụ ụzọ dị iche iche, ebe mgbaru ọsọ nke ịnye ahụmịhe nke ọma, nke bara uru na nke ịzụ ahịa. Dịka ọmụmaatụ, anyị nwere ike iji ozi nkeonwe gị iji:
* Dekọọ ma degharịa ozi ị nyere na mbụ
* Nyere gị aka ịchọta ngwa ngwa ozi, ngwaahịa na ọrụ
* Mepụta ọdịnaya nke bara uru maka gị
* Gwa anyị ozi banyere ọrụ anyị, ngwaahịa anyị na ọrụ anyị ọhụụ
Ndebanye aha na ịtụ: Iji jiri akụkụ ụfọdụ nke saịtị a ma ọ bụ ịtụ ngwaahịa, ndị ahịa niile ga-ejupụta mpempe ndebanye n'ịntanetị na ozi nkeonwe, gụnyere mana ọnweghị oke, aha gị, nwoke na nwanyị, mbupu na adreesị ịgba ụgwọ (es), ekwentị nọmba, adreesị ozi-e, na nọmba kaadị akwụmụgwọ. Na mgbakwunye, anyị nwere ike ịrịọ maka obodo ibi na / ma ọ bụ obodo nke nzukọ gị, ka anyị nwee ike irube isi na iwu na ụkpụrụ dị adị. A na-eji ozi a maka ịgba ụgwọ, nhazi usoro na azụmaahịa dị n'ime yana ịkọrọ gị maka usoro gị na saịtị anyị.
Adreesị Email: Ọtụtụ ebe dị na saịtị ahụ na-enye gị ohere ịbanye adresị email gị maka ebumnuche gụnyere gụnyere mana ejedebeghị na: ịdenye aha ọkwa nkwado, na-arịọ ngosi mgbe ụdị ọhụụ ma ọ bụ ụdị ngwaahịa bịara, ma ọ bụ debanye aha maka akwụkwọ akụkọ email anyị. Na mgbakwunye, aka ọ bụla na asọmpi nkwalitere site n'aka Wowowfaucet.com bụ nke afọ ofufo zuru oke ma chọọ ka ekpughere ozi kọntaktị achọrọ iji mee ka ndị mmadụ merie na ndị meriri. Anyị nwere ike biputere aha na obodo ndị meriri asọmpi na saịtị anyị.
Nyocha ngwaahịa: Anyị na-arịọ maka adresị email na ọnọdụ yana ntinye nke nyocha ngwaahịa niile. A ga-edebe adreesị ozi ịntanetị gị na nzuzo, mana ndị ọrụ gị ga-ahụ ya. Ihe omuma ndi ozo nile nke ịhoro itinye dika ihe nlebanyere anya ga-ano ndi ozo n’aputa.
Kedu ka Wowowfaucet.com si eji ozi nkeonwe m?
Esịtidem n’ime: Anyị na-eji ozi nkeonwe gị hazie usoro gị wee nye gị ọrụ ndị ahịa. Anyị nwere ike iji ozi nkeonwe gị na-anakọta ozi gbasara ndị ọbịa na saịtị a, melite ọdịnaya saịtị na nhazi ya, melite outreach anyị, ma zụọ ọrụ na ngwaahịa anyị.
Withgwa Gị: Anyị ga-eji ozi nkeonwe gị gwa gị banyere saịtị anyị na iwu gị. Ndị ahịa niile ga-enwerịrị adres email iji kwe ka nkwukọrịta Wowowfaucet.com banyere iwu etinye. Anyị nwere ike izitere gị ozi nkwenye mgbe ị denyere aha anyị na ọkwa metụtara ọrụ dị ka ọ dị mkpa (dịka ọmụmaatụ, kwụsịtụrụ ọrụ maka ndozi.) May nwekwara ike itinye adreesị email gị iji rịọ ngosi mgbe anyị nwetara akara ọhụrụ, ụdị ngwaahịa ma ọ bụ ngwaahịa, ma ọ bụ ka edebanye aha maka akwụkwọ ozi email anyị na onyinye pụrụ iche. Can nwere ike wepu aha ma ọ bụ wepu ozi ịntanetị ga - abịa n'oge ọ bụla.